Xiisadahan dagaal ayaa ka danbeeyay kadib markii xoogagga Al-shabaab ay ciidamo fara badan oo aad u qalabeysan ay soo dhoobeen deegaanka Biibi oo qiyaastii 30KM u jira degmada Afmadow, waxaana ay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xooggan.
War kasoo baxay Maamulka Al-shabaab ee gobollada Jubooyinka ayaa lagu sheegay in maalmahan soo socda ay la wareegi doonaan goobihii gacantooda ka baxay ee gobolka Jubada hoose oo ay kamid tahay Degmada Afmadow.
Sidoo kale masuuliyiinta maamulka Al-shabaab ee Jubooyinka ayaa sheegay in ciidamadooda ay kaabiga ku hayaan degmada Afmadow oo ay ku suganyihiin ciidamada dowladda, kuwa Raaskaambooni iyo Militariga Kenya oo iskaashanaya.
Dhinaca kale Afhayeenka ciidamada dowladda KMG ee Jubooyinka Max'ed Faarax Daahir oo HOL u waramay ayaa sheegay in ay ka warhayaan abaabullada ciidan ee ay wadaan xoogagga Al-shabaab, wuxuuna sheegay in ay u diyaargaroobeen weerar kasta oo kaga yimaada.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in ciidamadooda ay ku jiraan foojignaan aad u sareeysa islamarkaasina ay haatan ku suganyihiin meel aan sidaa uga fogeyn deegaanka Biibi ee gobolka Jubada Hoose.
Ciidamada dowladda KMG iyo kuwa Raaskaambooni oo kaashanaya Militariga Kenya ayaa dhawaan la wareegay degmada Afmadow ee gobolka Jubada Hoose, waxaana Madax katirsan dowladda Kenya ay sheeegeen in bisha soo socota ee August ay qorsheynayaan in ciidamadooda oo kaashanaya kuwa dowladda ay gacanta ku dhigaan magaalada Kismaayo oo ah magaalo ay siweyn indhaha ugu hayaan dhinacyada kasoo horjeeda Al-shabaab.